4 talo oo loo hayo dadka hurdada waqti dheer raadiya
Haddii aad ka mid tahay dadka aysan hurdada dhakhso kasoo dhicin marka ay seexdaan waxaan kuu heynaa talooyin aad kuu afnacaya.
Haddii aad arrimahan sameyso waxaad awoodeysaa in aad durba seexato marka aad sariirtaada ama furaashkaaga tagto.
Qaar ka mid ah talooyinkan waxaa laga yaabaa inaad horayba u ogeyd laakiin aad fududeysan jirtay, laakiin isku day inaad dhammaantood sameyso inta aad kala qabsaneyso helitaanka degdegga ah ee hurdada.
1- Qol Mugdi ah
Xaqiiji in qolka aad seexaneyso uu yahay mid gabi ahaanba mugdi ah oo aan iftiin lahayn marka aad gogosha tagto. Taasi micnaheedu waa inaad damiso dhammaan nalalka.
Tallaabadan waxay kaa caawineysaa in hurdadaadu ay noqoto mid xasilan oo aan la qasin, waayo inta badan dadku waxay ku soo kacaan iftiinka ama maba seexan karaan inta uu iftiin jiro.
30 daqiiqo oo jimicsi ah
Xeelad kale oo aad muhiim ah si hurdada ay u sahlanaato waa in qofka uu jimicsi iska sahlan sameeyo ugu yaraan 30 daqiiqo.
Laakiin jimicsigan ha sameynin marka ugu dambeysa ee aad gogosha isku diyaarineyso, sababtoo ah taas waxay meesha ka saareysaa inaad durba seexato maadaama ay unugyada xubnaha jirkaaga aad u shaqeynayaan.
Sidaas darteed jimicsiga xilligiisa ka dhig subaxa hore ama shaqada kaddib, maalin walba. Markaas waa hubaal in jirkaagu uu u carbismayo in ay hurdada kaa imaato isla marka aad seexato.
3- Wax aqrin
Taladan dadka qaar waxay u qaadan karaan mid cajiib ah laakiin qaarna aad bay u fahansan yihiin wax tarkeeda.
Marka aad buug soo qabsato xilliga aad seexaneyso, gaar ahaan buug aadan sheekadiisa ama mowduuciisa xiiso u qabin waxaa hubaal ah inaad durbadiiba ku caajiseyso oo ay hurdo kugu qabaneyso.
Tan baddalkeeda dadka qaar waxay hurdada ka hor daartaan filim aysan daneyneynin sidaas ayayna ku seexdaan.
4- Qabeys diirran
Biyo qandac ah ku qabeyso ka hor inta aadan gogosha tagin. Arrintan waxay kaa caawineysaa in jirkaaga uu xasilo marka aad biyo diirran isku shubto, maadaama murqahaagu ay kala furfurmayaan.
Haddii ay suuragal tahay, qabeyska kaddib marsao kareemka jirka ama saliid si aad u dareento istareex, markaas kaddibna waa hubaal in waxa kaliya ee niyaddaada kusoo dhaca uu noqonayo inaad si dhakhso ah u seexato.
Haka wahsanin qaabeyskan sababtoo ah wuxuu xitaa kaa caawinayaa inaad ka nasato howl-maalmeedkii aad ku mashquulsaneyd maalintaada oo dhan.
Iska ilaali arrimahan marka aad hurdada raadineyso
Ha sameynin wada sheekeusiga farriir qoraaleedka ah marka aad damcsan tahay seexashada ama aad gogoshaada ku jirto, waayo iftiinka telefoonka wuxuu kaa hor istaagayaa hurdada.
Howlo kale ha galin marka aad soo qabeysato kaddib, hana isku dayin inaad ka fikirto waxyaabaha aad sameyneyso maalinta xigta, waayo waxaa laga yaabaa inaad ka walshasho oo hurdadaaduna ay sii fogaato.
Ha cunin waxyaabo skortu ku badan tahay xilliga aad hurdada isku diyaarineyso. Si guud sokortu waxay ugu xun tahay caafimaadka, si gaar ahna ma habboona inaad sokor badan cunto xilliga ugu dambeysa ee aad seexaneyso adigoo aan dhaqdhaqaaq kale sii sameyn rabin.
Ha cabin qaxwo (coffee) marka aad damacsan tahay inaad seexato. Qaxwada waxaa ku jira maaddo firfircooni galisa jirka oo meesha ka saarta hurdada, inkastoo dadka qaar ay caadi u tahay inay seexdaan xitaa haddii ay cofee cabaan.
Waxaan rajeyneynaa in talooyinkan ay idin anfici doonaan oo sidoo kale aad la wadaagi doontaan qoysaskiinna iyo saaxiibbadiina.
4 dabeecadood oo uu leeyahay qofka aan horumarka gaareynin